Faa'iidooyinka ka mid ah ECN Broker ka badan Bixiyeyaasha Diyaarinta Shaqaalaha | FXCC
Qiimaha Ganacsi Lacageed ee Forex ECN Trading
Maxay yihiin farqiyada u dhaxeeya dhexdhexaadiyaha ECN / STP iyo baqaariyeyaasha macaamilka, oo badanaa loo yaqaan "kuwa wax iibsada"? Waxaanu soo saarnay miisaan fudud oo khibrad iyo khibrad ah, si loo muujiyo qodobbada muhiimka ah ee farqiga u dhexeeya ECN / Bixiyeyaasha STP iyo macaamil ganacsi oo samafal sameeya, laakiin waxaan u maleyneynaa in aan sidoo kale tagi karno midaas dheeraadka ah si loo faahfaahiyo faraqa faahfaahin dheeraad ah.
Qalabka Ganacsi ee ECN
Isticmaal Siyaasad Farsamo Badan
Iyada oo ganacsadaha ganacsadaha iibiya, ganacsade ayaa ogtahay jagooyinkaaga furan, qaabka ganacsiga iyo xeeladaha iyo u isticmaali karo macluumaadkan faa iidadiisa.
On the FXCC ECN, waxaad si dhaqso ah ugu ganacsan kartaa qiimaha ay bixiyaan hay'adaha hogaaminaya dhaqaalaha.
Dib-u-celinta ayaa ku badan ganacsiga faafidda dhaqanka. FXCC dib uma soo celineyso. Tiknoolajiyada farsamada iyo qadarka qiimaha jaban / wakhtiga qadiimiga ah ayaa loogu talagalay in lagu buuxiyo ganacsigaaga qiimaha suuqa.
FXCC ma qaadato jagooyin macaamiisheeda oo dhan.
Ganacsi inta lagu jiro Fasaxyada Dhaqaale
FXCC waxay u ogolaataa dhammaan macaamiisha iyadoon loo eegin miisaaniyada ganacsiga ee ganacsiga iyo iibinta amarro cusub inta lagu jiro fasaxyada dhaqaale ee muhiimka ah. Inta lagu jiro sii-deyntaas, iyo waqtiyada isbedelka suuqyada aan caadiga ahayn, dalabka / bixinta fiditaanka ayaa ka ballaadhan kuwa hela xilliyada 'caadiga' suuqa.
Noocee ganacsade ah ayaad tahay?
Nooc kasta oo ganacsade ah oo aad tixgeliso naftaada inaad tahay: Waqti dhiman, waqti buuxa, ama hiwaayad iyo wax kasta oo khibraddaadu jirto waxaa jira hal joogto ah oo khuseeya ganacsiga, taas oo ahmiyad u leh ganacsatada cusub sida ay u tahay khibrad sare; habdhaqan xirfadeed oo dhinaca ganacsiga ah ayaa mar walba ku guuleysta. Ganacsatadu waa inay had iyo jeer yihiin, iyada oo aan loo eegin waayo-aragnimadooda ganacsiga, waxay u hoggaansamaan akhlaaqda ganacsiga iyagoo leh dadaal iyo xirfad-darro.
Doorashada Bixiyaha Xaqiiqda waa mid muhiimad weyn leh
Nooca doomaha aad doorato waa go'aan adag, taas oo saameyn weyn ku leh guushaada suurtogalka ah. Haddii aad doorato macaamil ganacsi, mise macaamil macaamil ganacsi? Waa doorasho toos ah iyo su'aal, midkastana waxaan uga jawaabi doonaa isla markiiba. Ganacsatada culus, kuwa gardarada ah, ee soo saaray aragti xirfad leh iyo habab, waa in ay doortaan oo kaliya xulashada ganacsiga ECN / STP markasta oo waxaan soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah sababaha sababta.
Marka hore, inta badan ganacsatada ganacsigu waa ganacsatada ama maqaayad maalmeed - ganacsigoodu waxay socon karaan daqiiqado, daqiiqo, ama saacadahan ganacsatada FX dhif ma qabtaan ganacsiga FX habeenkii. Sidaa daraadeed waa inay noqotaa go'aan sahlan oo lagu go'aamin karo haddii aad doorbidayso inaad sii faafto, laakiin inaad guddi u sameyso ganacsi oo leh ECN / STP, oo ka dhexjirsan faafinta ballaaran iyo (asluub ​​ahaan) bixin wax lacag ah.
Ganacsatada maareynta macaamiisha "suuqa ka dhig", suuqooda. Waxay xor u yihiin inay ku soo sheegaan sicirkooda suugaaneed (iyaga oo ku xiran liiska shuruudaha isbeddelka ee ay ku jiraan) taas oo ku jiri karto sida ay u dheelitirantahay dakhligoodu, oo ku saleysan mugga ganacsiga ee ay qabanayaan macaamiishooda. Sidaa darteed xigashooyinkooda waa qadar macmal ah.
Faa'iidada maareynta miisaska ayaa badanaa lagu soo rogaa, taas oo u muuqan karta mid soo jiidasho leh haddii ay soo gudbinayaan faafitaan go'an, tusaale ahaan hal dhuun oo ah EUR / USD. Si kastaba ha ahaatee, ganacsatada waxaa laga yaabaa inay dareemaan kala-guur iyo faqri-xumo, taas oo macnaheedu yahay in xaqiiqadu ay yihiin kuwo ka buuxsamaya qiimaha runta ah ee suuqa oo faafidda ku dhawaad ​​laba, ama saddex pips halkii macaamil. Macaamilka macaamilka ganacsiga ayaa sidoo kale dib u dhigi kara amarka buuxinta si uu u helo qiimaha ugu fiican ee uu leeyahay dulsaar.
Si kastaba ha ahaatee, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya la tacaalida baqaariyeyaasha miiska iyo kuwa loo yaqaan 'ECN / STP brokers' waa xaqiiqda macaamiisha macaamiisha ah ee macaamiisha ah oo saameyn ku yeelanaya macaamiishooda. Haddii macaamilka macaamilka ganacsigu uu ku guuleysto markaa dillaalku wuu lumiyaa, waxay si waxtar leh ugu tartamayaan macmiilka. Halkaa marka doodi la soo gudbin karo oo la dheelitirnaanshaha macaamilka macaamil ganacsi waa dhexdhexaad ah marka la eego natiijada, xaqiiqadu waxay tahay in macaamil ganacsade ah uu qaato boos uu raadinayo faa'iido haddii macmiilku lumiyo.
Marka la eego qaabka ECN / STP faafitaanku waa mid isbeddelaya, iyada oo ku xidhan xaaladaha suuqa ee dhabta ah waqti kasta iyo waqtiyada ay bixiyaan bixiyeyaasha xisaabaadka; oo ka kooban bangiyo waaweyn iyo hay'ado gacan ka geysanaya shabakada elektaroonigga ah ee loo habeeyey. Ganacsatadu waxay bixiyaan lacag yar oo lacag ah oo ganacsi ah, waxaana jira guud ahaan wax lacag ah oo aan la bixin. Iyaga oo ay kuxiriirayaan ECN / STP waxay noqdaan buundo, khaanad u dhexeeya ganacsadaha iyo suuqa. Ganacsaduhu wuxuu si toos ah u galaa suuqa isaga oo adeegsanaya meelo elektaroonig ah oo la qaabeeyey oo aan lahayn wax caqabado ah, faragelin la'aan iyo wax ka-qabasho la'aan. Qiimuhu wuxuu ka yimaadaa shabakada, barkad dhaqaale oo ay sameeyeen kuwa wax ku biiriya.
Marka la eego qaabka ECN / STP marnaba wax dib loo soo celin, amarrada oo dhan waxay ku buuxsamaan qiimaha ugu macquulsan waqtiyada la siinayo. Mararka qaarkood qiimahaasi waxay noqon karaan qiimo aad u wanaagsan, sida hoos u dhiganta boqolkiiba tiro yar, oo laga yaabo in 0.1 ay ku xiran tahay qiyaasta waxqabadka gudaha ECN iyo inoo keena faa'iido kale oo muhiim ah oo ganacsi ah adoo adeegsanaya ECN / STP; qoto dheer ee suuqa.